APUS Turbo Cleaner - ဗိုင်းရပ်စ်ဖယ်ရှားရေးကိရိယာ၊ Android အတွက် APK ဒေါင်းလုပ်ရယူပါ
ပင်မစာမျက်နှာ » အသုံးအဆောင်များ Apps ကပ » APUS Turbo Cleaner - Junk Cleaner, Anti-Virus
APUS Turbo Cleaner - Junk Cleaner, Anti-Virus APK ကို
APUS Turbo Cleaner Android အတွက်တစ်ဦးကိုအခမဲ့နှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်သန့်ရှင်းတဲ့ software ကိုပါ! လုံးဝသင့်ရဲ့ဖုန်းကိုပိုကောင်းအောင်မြင့်မားတဲ့အဆင့်သတ်မှတ်ချက်နှင့်အတူအကောင်းဆုံး tool အဖြစ်, APUS Turbo Cleaner, သင့်ရဲ့ဖုန်း Junk ဖိုင်များကိုရှင်းလင်းသင့်ရဲ့ဖိုင်များအားလုံးစီမံခန့်ခွဲနှင့်သင့် apps များစီမံခန့်ခွဲ, ဒါပေမယ့်လည်း, ဖုန်း CPU ကိုနှိမ့်ချအအေးဘက်ထရီကိုကယ်တင်နှင့်သင့် privacy ကိုကာကှယျပေးနိုငျမသာ။ NOW ကပိုမိုမြန်ဆန်ချောမွေ့အတွေ့အကြုံကိုခံစားကြည့်ပါ!
APUS Turbo Cleaner ပျေါလှငျ:
★အစွမ်းထက် Cleaner - သန့်ရှင်း Junk ဖိုင်များကိုပိုသိုလှောင်မှုကိုတက်လွတ်!
★ဖိုင်များ Manager ကို - အားလုံးအသုံးမပြုတဲ့ဖိုင်တွေရှာပါနဲ့ clean!
★ App ကိုမန်နေဂျာ - မလိုချင်တဲ့ cache ကိုဖယ်ရှားလိုက်ပါကအလွယ်တကူ, အသုံးမပြုတဲ့ apps များစီမံခန့်ခွဲရန်!
★ Antivirus ကို - ဝေးဟက်ကာတိုက်ခိုက်မှုကနေရယူလိုက်ပါနှင့်သင့်ဖုန်းကိုလုံခြုံရေး 24 /7ဆက်ကြိုးစားပါ!
★သတိပေးချက် Cleaner - အဘယ်သူမျှမနှောင့်အယှက်အသိပေးချက်များကိုတော့ဘူး
★ App ကို Locker - WhatsApp ကိုဓာတ်ပုံနှင့်အခြားပုဂ္ဂလိကသတင်းအချက်အလက်များကာကွယ်ပါ။ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲဝင်ရောက်ခွင့်ကိုတားဆီး။
★ဖုန်း Booster & CPU ကို Cooler & ဘက်ထရီချွေတာ - တဦးတည်းကိုထိပုတ်ပါနှင့်သင်၏ဖုန်းကိုဆီလျော်အောင်
အားလုံးတဦးတည်းအတွက် Junk ဖိုင်များကို, app ကို cache များကိုကြော်ငြာ cache များကိုနှင့်စနစ် cache များကို, စသည်တို့ Whatsapp, Facebook, Instagram ကိုကဲ့သို့လူမှုရေး apps များအတွက်အများအပြားအသုံးဖိုင်တွေဖွင့်လွတ် - Cleaner အစွမ်းထက်
files Manager ကို - တစ်ဦးကိုထိပုတ်ပါအများအပြား GB အထိသိုလှောငျ (ROM ကို) အထိအခမဲ့အလွယ်တကူစစ်ဆေးနှင့်သန့်ရှင်းသော unsed ကြီးတွေဖိုင်များ, ဖိုင်တွေ, ဗီဒီယိုဖိုင်တွေနဲ့အသံဖြင့်ဖိုင်များကို download လုပ်ပါရန်။
App ကို Manager က - နည်း-အသုံးပြုသော Apps ကပင့်ယူမည်မျှအာကာသ Check အစုလိုက်
အသုံးမပြုတဲ့ apps များ uninstall ။ မူလ installation ကိုပြည်နယ် app ကိုပြန်၏။ Check နှင့်သန့်ရှင်းရေး Apk ယင်ကောင်။
အစွမ်းထက် Anti-virus & privacy ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး★
ဆန့်ကျင် VIRUS, မြန်နှုန်းမြင့်နှင့်အတူအားလုံး installed apps များစကင်ဖတ်နက်ရှိုင်းစွာဖုန်းကိုအားလုံးကိုဖိုင်တွေ scan, အစစ်အမှန်အချိန်အတွက် WIFI status ကို scan ။ 24H ပိတ်ပင်တားဆီးမှုများနှင့်ဟက်ကာတိုက်ခိုက်မှုရှောင်ရှားရန်မည်သည့်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးများနှင့်ခြိမ်းခြောက်မှုများကိုဖယ်ရှားလိုက်ပါ။ လုံးဝလုံခြုံဖုန်းကိုဘေးကင်းလုံခြုံမှုမှ AV စနစ်စမ်းသပ်ခြင်းအတွက်ထိပ်တန်း anti-virus အင်ဂျင်ကိုအသုံးပြုပါ။
App ကို Locker - သင် Pin သို့မဟုတ်ပုံစံအားဖြင့်ပုဂ္ဂလိကသတင်းအချက်အလက်များပါဝင်သည်ရာမဆိုအထိခိုက်မခံ app ကို encrypt လုပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
မက်ဆေ့ခ်ျကိုလုံခြုံရေး - အချိန်မီ peeping privacy ကိုရပ်တန့်ဖို့ WhatsApp ကို, Messenger ကို Facebook ကပုဂ္ဂလိကမက်ဆေ့ခ်ျများဖုံးကွယ်ထားနိုင်တယ်။
မှတ်ဉာဏ် Booster, CPU ကို Cooler နှင့်ဘက်ထရီချွေတာ - ဖုန်းကိုမှတ်ဉာဏ်နေရာလွတ်, အကောင်းဆုံးအခြေအနေများအောက်တွင်သင်၏ဖုန်းကိုသိမ်းဆည်းထားပါထပ်တိုးဖုန်းကိုအမြန်နှုန်းနှင့်ဘက်ထရီရပ်တည်ချက်ဖြင့်အချိန် 50% လုံးဝနီးစပ်နောက်ခံ apps များနှင့် service များကရှည်။ အပူလွန်ကဲရပ်တန့် & ပါဝါစားသုံးမှုကိုကျော်။
လွယ်ကူသောစာဖတ်ခြင်း & စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်အရေးမကြီးအကြောင်းကြားစာဘားစုဆောင်းနှင့်အတူတူပင် time.Twitter မှာနှောင့်အယှက် spam များကိုအကြောင်းကြားစာများကိုဖုံးကွယ်ထား, ကို Message, etc
★ခေါ်ရန် blocker & လက်ထောက်
block ပစ်မှတ်နံပါတ်နှင့်ငါတို့ရှိသမျှသည်နှောင့်အယှက် spam များကိုခေါ်ဆိုခပိတ်ဆို့နှင့်ပိုပြီးအစွမ်းထက်ဖုန်းကိုအသုံးပြုနိုင်စွမ်းအင်္ဂါရပ်ပေးနိုငျဖုန်းနံပါတ်နှင့်ဆက်သွယ်ရန်ခွင့်ပြုချက်နှင့်အတူခေါ်ဆိုသူ ID ကိုဖေါ်ထုတ်။
ကျနော်တို့ (သက်ဆိုင်ရာတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်တွင်သို့မဟုတ်ညီမျှနိမ့်ဆုံးအသက်အရွယ်) 16 နှစ်အောက်မဆိုအရွယ်မရောက်သေးသူများအတွက်ဝန်ဆောင်မှု / content တွေကိုမပေးပါဘူး။ သငျသညျအထကျပါအခွအေနအသေးစားအစည်းအဝေးဖြစ်ကြလျှင်, သင်အသုံးပြုသူသဘောတူညီချက်၏စည်းကမ်းချက်များကိုဖတ်ရှုနှင့်သင့်အုပ်ထိန်းသူများ၏လမ်းညွှန်မှုအောက်တွင်ဒီ app ကိုအသုံးပြုဖို့, သင်၏အုပ်ထိန်းသူကဒီ app ကိုသင့်ရဲ့အသုံးပြုမှုရန်သဘောတူကြောင်းအတည်ပြုရမယ်
17.77 ကို MB
APUS Group မှ